ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ ၀တ္ထုတစ်အုပ်လိုပဲတဲ့…💌 – Trend.com.mm
Posted on September 25, 2018 June 18, 2019 by Noel
ဒီတစ်ခါတော့ အချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒဿနစာစုလေးတွေကို Trend ပျိုမေပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်ပြီးမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။နာမည်ကျော်တွေရဲ့ဒီစာစုလေးတွေက ပျိုမေတို့ရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ သိမှတ်စရာတစ်ခုခုတော့ရသွားစေမှာပါ
နာမည်ကျော်စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Yevgeny Zamyatin ဆိုသူအမျိုးသားက “ယောကျာ်းတစ်ယောက်ဟာ ၀တ္ထုတစ်အုပ်လိုပဲ နောက်ဆုံးစာမျက်နှာမရောက်သေးခင်အထိ ဘယ်လိုဇာတ်သိမ်းမလဲဆိုတာ မသိရဘူး”လို့ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။မိန်းကလေးတွေရဲ့စိတ်က နားလည်ရခက်သလို ယောက်ျားလေးတွေရဲ့စိတ်ဟာလည်းရှုပ်ထွေးပါတယ်။
နာမည်ကြီးစာရေးဆရာ Paulo Coelho ကတော့ “ဘ၀ကတိုတိုလေးပါ။ဖြည်းဖြည်းချင်း နမ်းပါ။အားရပါးရ ရယ်မောပါ။အချစ်စစ်နဲ့ချစ်ပါ။မြန်မြန်ဆန်ဆန်ခွင့်လွှတ်ပါ”တဲ့။ဒါ့အပြင် “အချစ်ဆိုတာ တစ်ယောက်ယောက် ပေါ်လာပြီး အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမပေးခင်အချိန်အထိတော့ စကားလုံးတစ်လုံးသာသာပါပဲ”လို့ဖွင့်ဆိုထားပါသေးတယ်။စာရေးဆရာတွေဆိုတာ အချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင် ဂုရုကြီးတွေပါပဲ 👀
တယောပညာရှင် Pablo Casals ရဲ့ အချစ်စာစုလေးက “ကမ္ဘာကြီးအတွက် မင်းက လူတစ်ယောက်ဖြစ်ရုံဖြစ်ပေမဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက်တော့ မင်းက ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်”တဲ့
ပြင်သစ်စာရေးဆရာ Francois de La Rochefoucauld ရဲ့စာစုလေးကတော့“အချစ်စစ်ဆိုတာသရဲတစ္ဆေလိုပဲတဲ့။လူတိုင်းနီးပါး အဲ့ဒီအကြောင်းပြောလေ့ရှိပေမဲ့ မြင်ဖူးတဲ့သူနည်းတယ်”ဆိုတာပါပဲ။ဟုတ်ရဲ့လား? “ကိုယ်က သူ့ပျော်ရွှင်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင် အဲ့ဒီလူပျော်ရွှင်ဖို့က ကိုယ်ဆန္ဒအရှိဆုံး၊အလိုချင်ဆုံးပဲဆိုတဲ့အချိန်က အချစ်ဆိုတာကိုသိသွားတဲ့အချိန်ပါပဲ”လို့ အမေရိကန်မင်းသမီးချော Julia Roberts က ပြောခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်စာရေးဆရာ Nicholas Sparks ကတော့ “အချစ်ဆိုတာ လေလိုပဲ။မမြင်နိုင်ပေမဲ့ ခံစားလို့ရနိုင်တယ်”လို့ဖွဲ့ဆိုထားပြီး”အချစ်ဆိုတာ ပေးဆပ်ရင်းနဲ့ပဲ ရှည်ကြာခိုင်မြဲလာပါတယ်။အချစ်ကိုပေးလိုက်တာကသာ အချစ်ကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်တဲ့နည်းဖြစ်တယ်”လို့ အမေရိကန်စာရေးဆရာ Elbert Hubbard က အချစ်အပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုဖွင့်ဟပြထားပါတယ်။
William Shakespeare ကတော့ “အချစ်ကိုတန်ဖိုးမထားတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်အပေါ်မှာ သင့်အချစ်တွေကိုမဖြုန်းပါနဲ့”တဲ့။
ကနေဒီယန်စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Orlando Aloysius Battista ကတော့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ အမှန်ကန်ဆုံးအရာတစ်ခုကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ “လူအများစုရဲ့အကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်က အသက်ရှင်နေတုန်း ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေကို ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာပြောပြဖို့ ဆိုင်းတွနေခြင်းပါပဲ”တဲ့ ထိရှ
ဒါတွေကတော့ နာမည်ကျော်တွေဖွင့်ဆိုထားတဲ့အချစ်ဒဿနတစ်ချို့ပါ။ဒါလေးတွေဖတ်ပြီး အချစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ တစ်ခုခုတွေးတောစရာ ရသွားမယ်ထင်ပါတယ်နော် 💌
ဒီတဈခါတော့ အခဈြနဲ့ပတျသကျတဲ့ဒဿနစာစုလေးတှကေို Trend ပြိုမပေရိသတျတှအေတှကျ ပွနျပွီးမြှဝပေေးခငျြပါတယျ။နာမညျကြျောတှရေဲ့ဒီစာစုလေးတှကေပြိုမတေို့ရဲ့ အခဈြရေးနဲ့ပတျသကျလို့ သိမှတျစရာတဈခုခုတော့ရသှားစမှောပါ
နာမညျကြျောစာရေးဆရာတဈယောကျဖွဈခဲ့တဲ့ Yevgeny Zamyatin ဆိုသူအမြိုးသားက “ယောကျြားတဈယောကျဟာ ဝတ်ထုတဈအုပျလိုပဲ နောကျဆုံးစာမကျြနှာမရောကျသေးခငျအထိ ဘယျလိုဇာတျသိမျးမလဲဆိုတာ မသိရဘူး”လို့ပွောခဲ့ဖူးပါတယျ။မိနျးကလေးတှရေဲ့စိတျက နားလညျရခကျသလို ယောကျြားလေးတှရေဲ့စိတျဟာလညျးရှုပျထှေးပါတယျ။
နာမညျကွီးစာရေးဆရာ Paulo Coelho ကတော့ “ဘဝကတိုတိုလေးပါ။ဖွညျးဖွညျးခငျြး နမျးပါ။အားရပါးရ ရယျမောပါ။အခဈြစဈနဲ့ခဈြပါ။မွနျမွနျဆနျဆနျခှငျ့လှတျပါ”တဲ့။ဒါ့အပွငျ “အခဈြဆိုတာ တဈယောကျယောကျ ပျေါလာပွီး အဓိပ်ပာယျဖှငျ့မဆိုပေးခငျအခြိနျအထိတော့ စကားလုံးတဈလုံးသာသာပါပဲ”လို့ဖှငျ့ဆိုထားပါသေးတယျ။စာရေးဆရာတှဆေိုတာ အခဈြနဲ့ပတျသကျလာရငျ ဂုရုကွီးတှပေါပဲ 👀
တယောပညာရှငျ Pablo Casals ရဲ့ အခဈြစာစုလေးက “ကမ်ဘာကွီးအတှကျ မငျးက လူတဈယောကျဖွဈရုံဖွဈပမေဲ့ လူတဈယောကျအတှကျတော့ မငျးက ကမ်ဘာကွီးဖွဈပါလိမျ့မယျ”တဲ့
ပွငျသဈစာရေးဆရာ Francois de La Rochefoucauld ကတော့ “အခဈြစဈဆိုတာသရဲတစ်ဆလေိုပဲတဲ့။လူတိုငျးနီးပါး အဲ့ဒီအကွောငျးပွောလရှေိ့ပမေဲ့ မွငျဖူးတဲ့သူနညျးတယျ”ဆိုတာပါပဲ။ဟုတျရဲ့လား?
“ကိုယျက သူ့ပြျောရှငျမှုတဈစိတျတဈပိုငျးမဟုတျဘူးဆိုရငျတောငျ အဲ့ဒီလူပြျောရှငျဖို့က ကိုယျဆန်ဒအရှိဆုံး၊အလိုခငျြဆုံးပဲ”ဆိုတဲ့အခြိနျက အခဈြဆိုတာကိုသိသှားတဲ့အခြိနျပါပဲလို့ အမရေိကနျမငျးသမီးခြော Julia Roberts က ပွောခဲ့ပါတယျ။
အမရေိကနျစာရေးဆရာ Nicholas Sparks ကတော့ “အခဈြဆိုတာ လလေိုပဲ။မမွငျနိုငျပမေဲ့ ခံစားလို့ရနိုငျတယျ”လို့ဖှဲ့ဆိုထားပွီး”အခဈြဆိုတာ ပေးဆပျရငျးနဲ့ပဲ ရှညျကွာခိုငျမွဲလာပါတယျ။အခဈြကိုပေးလိုကျတာကသာ အခဈြကိုသိမျးဆညျးထားနိုငျတဲ့နညျးဖွဈတယျ”လို့ အမရေိကနျစာရေးဆရာ Elbert Hubbard က အခဈြအပျေါထားတဲ့သူ့ရဲ့အမွငျကိုဖှငျ့ဟပွထားပါတယျ။
William Shakespeare ကတော့ “အခဈြကိုတနျဖိုးမထားတတျတဲ့လူတဈယောကျအပျေါမှာ သငျ့အခဈြတှကေိုမဖွုနျးပါနဲ့”တဲ့။
ကနဒေီယနျစာရေးဆရာတဈယောကျဖွဈတဲ့ Orlando Aloysius Battista ကတော့ အခဈြရေးနဲ့ပတျသကျလို့ အမှနျကနျဆုံးအရာတဈခုကိုပွောခဲ့ပါတယျ။ဘာလဲဆိုတော့ “လူအမြားစုရဲ့အကွီးမားဆုံးအားနညျးခကျြက အသကျရှငျနတေုနျး ကိုယျခဈြတဲ့သူတှကေို ဘယျလောကျခဈြတယျဆိုတာ
ပွောပွဖို့ ဆိုငျးတှနခွေငျးပါပဲ”တဲ့ ထိရှ
ဒါတှကေတော့ နာမညျကြျောတှဖှေငျ့ဆိုထားတဲ့အခဈြဒဿနတဈခြို့ပါ။ဒါလေးတှဖေတျပွီး အခဈြနဲ့ပတျသကျလို့ တဈခုခုတှေးတောစရာ ရသှားမယျထငျပါတယျနျော 💌
အိပ်ရာပေါ်မှာ ဖုန်းအားသွင်းရင်း အိပ်ပျော်သွားတဲ့ ညတွေများနေပြီလား?